မြင်းနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့သူအမျိုးသမီး – ဂျပန်နိုင်ငံ ဒဏ္ဍာရီ! - JAPO Japanese News
မြင်းနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့သူအမျိုးသမီး – ဂျပန်နိုင်ငံ ဒဏ္ဍာရီ!
ဟူး 29 Dec 2021, 16:59 ညနေ
LGBTQ ဆိုတဲ့စကားလုံးက ရေပန်းစားလာပေမယ့် အရင်ကတည်းက အချစ်ဆိုတာ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးအချင်းချင်းမှာပဲ ဖြစ်တည်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးက ရှေးယခင်ကတည်းက မရှိခဲ့ဖူးဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
JAPO မှာလည်း အရှေ့မှာ ဖော်ပြခဲ့ဖူးသလိုမျိုး ယောကျာ်းရင့်မာကြီးဖြစ်တဲ့ ဆာမူရိုင်းတွေတောင် အမျိုးသားအချင်းချင်းချစ်ကြိုက်ကြတဲ့ မှတ်တမ်းတွေလည်း အများကြီးရှိတဲ့အတွက် အခုခေတ်ဂျပန်ထက် အရင်ခေတ်ဂျပန်ကတောင် ပိုပြီး ပွင့်လင်းမှုရှိမလားတောင်မသိပါဘူး။
ဒါ့အပြင် အချို့လူတွေမှာ လူသားအချင်းချင်း ချစ်ခင်မှုမဟုတ်တဲ့ သာလွန်ဆန်းကြယ်တဲ့အချစ်လည်း ရှိနေပြန်ပါတယ်။
ယနဂိဒ ခုနိအိုရဲ့ လက်ရာဖြစ်တဲ့ “ တိုအိုနိုမိုနိုဂတရိ” မှာဆိုရင် ရိုးရာပုံပြင်နဲ့ ဒဏ္ဍာရီအမျိုးမျိုး ပါဝင်ပြီး အဲ့ထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Oshirasama” ဒဏ္ဍာရီကတော့ မြင်းနဲ့ချစ်ကြိုက်မိတဲ့အမျိုးသမီးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရှေးရှေးတုန်းက လယ်သမားမိသားစုမှာ သမီးတစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဆင်းရော၊ အချင်းပါလှတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက် လာရောက်တောင်းရမ်းသူတွေလည်း အများကြီးရှိပေမယ့် အားလုံးကို ငြင်းဆန်ပြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဖခင်ဖြစ်သူက သံသယဝင်စွာနဲ့ မေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါ သမီးဖြစ်သူက မြင်းနဲ့လက်ထပ်လိုကြောင်း ပြောလာခဲ့ပါတယ်။
ဖခင်ဖြစ်သူဟာ အံ့သြသွားခဲ့ပေမယ့် သမီးဖြစ်သူဟာ အရင်ကတည်း တစ်ယောက်တည်း မြင်းဇောင်းထဲမှာ မြင်းနဲ့ တစ်ယောက်တည်းစကားပြောနေတာကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာမြင်ဖူးကြောင်း ပြန်လည်အမှတ်ရသွားပါတယ်။
ဒီလောက်နှစ်တွေအကြာပြီး ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပျိုးထောင်ခဲ့တာတောင်
ဘာကြောင့် မြင်းနဲ့ လက်ထပ်ချင်ရတာလဲ！！！
ပြီးတော့ ဖခင်ဖြစ်သူဟာ အနည်းငယ်ဝေးကွာတဲ့ ရဲတိုက်အနီးမြို့ဘက်ကို ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။
သမီးဖြစ်သူ ဒီလိုစကားပြောတာက တောမှာ ထက်မြက်တဲ့အမျိုးသားတွေ မရှိလို့ ဒါကြောင့် ထက်မြက်တဲ့ယောကျ်ားကို ခေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ပါ။
ဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ ဘယ်လိုလက်ထပ်ခဲ့လဲဆိုတာကို ချန်လှပ်ထားတဲ့အတွက် အသေးစိတ်တော့မသိရပေမယ့် ဖခင်ဖြစ်သူ မရှိတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ သမီးဖြစ်သူဟာ မြင်းနဲ့ လက်ထပ်ပြီးသွားပါပြီ။
အိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို သိရှိသွားချိန်မှာ ဒေါသပုန်ထပါတော့တယ်။
မြင်းကို အိမ်နောက်က သစ်ပင်မှာ ချည်ပြီး ပုဆိန်နဲ့ လည်ပင်းကို ခုတ်ပါတော့တယ်။
ပြုတ်ကျလာတဲ့လည်ပင်းကို ပိုက်ပြီး သမီးဖြစ်သူဟာ ငိုကြွေးပါတော့တယ်။
အဲ့ဒီအခါ ရုတ်တရတ် သမီးဖြစ်သူကို ခေါ်ပြီး မြင်းလည်ပင်းက ပျံထွက်သွားပုံရပါတယ်။
ချစ်ရတဲ့သမီးဖြစ်သူကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီး ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေတဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူဟာ တစ်နေ့မှာ အိပ်မက်မက်ပါတော့တယ်။
အဖေ မလိမ္မာတဲ့သမီးဖြစ်ခဲ့လို့ တောင်းပန်ပါတယ်။
အိမ်နောက်ဖေးကအပင် (မြင်းကိုချည်ခဲ့တဲ့သစ်ပင်) မှာ ကျွန်မတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ပုံကို ပန်းပုထုပေးမယ်ဆိုရင် အဖေ့အတွက် အကျိုးများပါလိမ့်မယ်။
အိပ်မက်ထဲအထိတောင် မိမိတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးအပေါ် ခွင့်လွှတ်မှုတောင်းခံတဲ့သမီးဖြစ်သူရဲ့ ဇွဲကောင်းတဲ့စိတ်ကို ဖခင်က အရှုံးပေးလိုက်ရပြီး ပြောထားတဲ့အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါတော့တယ်။
ရုပ်ထုဟာ အိမ်နောက်ဖေး ပိုးစာပင်ကိုင်းမှာ ထွင်းထုထားတဲ့အရုပ်လေးဖြစ်ပေမယ့် အဝတ်ကို သေသေချာချာလေး ဆင်ယင်ပေးထားပါတယ်။
ထူးဆန်းပေမယ့် ပျောက်ဆုံးတဲ့အရာရှိလို့ မြင်းရဲ့မျက်နှာကို ကြည့်တဲ့အခါ မြင်းမျက်နှာက သွားရှာရမယ့်လမ်းဘက်တာလှည့်နေတာလိုမျိုး ရှိတဲ့အတွက် အဲ့ဒီကနေစပြီး “သိရှိခြင်းနတ်ဖုရား” “Oshirasesama”ဆိုတဲ့ အမည်ပေးပြီး အဲ့ဒီကနေစလို့ “Oshirasama” လို့ အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲလာကာ လက်ရှိမှာလည်း အချို့သောတိုးဟိုခုဒေသဘက်မှာ ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အခြားပုံပြင်မှာလည်း ဒီလိုရေးသားထားပါသေးတယ်။
မြင်းကို ချည်ထားတဲ့ ပိုးစာပင်ရဲ့အရွက်ကို ပိုးဖလံကောင်က ကြိုက်လို့ စားကြောင်းကိုလည်း သမီးဖြစ်သူက အိမ်မက်ထဲမှာ ပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပိုးဖလံမွေးမြူမှုခေတ်စားလာပြီး ကျေးရွာက ပိုချမ်းသာလာတဲ့အတွက် “Oshirasama” ကို စိုက်ပျိုးရေးနတ်ဘုရားအဖြစ်လည်း ကိုးကွယ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးဟာ အခုဆိုရင် ကျား-မ မခွဲခြားတဲ့ အချစ်ရေးကို စတင်လက်ခံနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခေတ်မှာဆို မျိုးနွယ်မတူတဲ့ချစ်ခြင်းကို လက်ခံပေးမယ့်နေ့လည်း ရောက်လာမလားမသိဘူးနော်။
အရက်မူးနေတဲ့ယောကျ်ားကိုယ်စား ရဲတိုက်ကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ဇနီး-မပျော့ညံ့ခဲ့တဲ့ ဆာမူရိုင်းတွေရဲ့ မိန်းမ?
မုန်တိုင်းကြောင့် သေကွဲကွဲခဲ့ရတဲ့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးရဲ့ နာကျင်ကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ရပ်
ရှေးခေတ်ဂျပန်မှာ ဖောက်ပြန်ရင် အမျိုးသားရော၊ အမျိုးသမီးကိုပါ သေဒဏ်ပေးတယ်!?
မိန်းကလေးခန္ဓာကိုယ်ပေါ် ရေးဆွဲလာတဲ့ ခေတ်သစ်မှင်ပန်းချီပညာရှင်
ပျောက်ကွယ်သွားတော့မယ့် ရိုးရာယဥ်ကျေးမှုတစ်ခု၊ 紙切りKamikiri !!!
ဂျပန်တွေက ဘာကြောင့် ကွဲအက်နေတဲ့ ပန်းကန်လုံးတွေကို ကြိုက်ကြတာလဲ? ဂျပန်မှာပဲ ရှိတဲ့ အလှတရားအမြင်